I-AutoCAD Imephu - Geofumed
I-GeoCivil inomdla obonakalayo kwiblogi ukusetyenziswa kwezixhobo ze-CAD / GIS kwindawo yoBunjineli boLuntu. Umlobi walo, umlimi wase-El Salvador, ungumzekelo omhle wokuqhelanisa ukuba amacandelo okufundela ayenayo imfundo yoluntu ngokubanzi-ngokubanzi; Ngokuqinisekileyo luyinto ebaluleke kakhulu ngokubonga ...
AutoCAD-AutoDesk, Ukuprinta kokuqala
kutshanje Cadapult wamemezela ukukhululwa uhlelo yayo entsha: kwembiwe nzulu amaphepha AutoCAD Civil 3D 2011 416 7 ecwangciswe izahluko kunye CD equka imisebenzi eyenziwe kwicandelo ngalinye, phantsi kwesikhokelo Rick Ellis. Ngamafutshane, ukufumana enkulu kunoma ubani ofuna ukufunda i-Civil 3D kakuhle kwaye wandise ...
Videos Okuninzi for Civil 3D, AutoCAD ne Revit Map
... the best, emva AUGI MexCA babeza kulondolozo ... Abanye ixesha Kwakude ndakwenza uphononongo AUGI isahluko yayo emvula, kunye isixa exabisekileyo izixhobo kubasebenzisi AutoCAD Civil3D ubugcisa kunye Map. Ngosizi page wangena Ulondolozo kunyaka ophelileyo, xa sigqiba kubuyekezwa ukulinda ...
Le nyanga i-new geoinformatics ifikeleleke, kunye neengqungquthela ezikhuselekileyo kwi-CAD, i-GIS, ukuqonda okude, ukuphathwa kwedatha; imiba engasayi kubonwa yodwa. Ngokomgaqo, ndinika uhlalutyo lwenye yezihloko ezinomdla kum, ekugqibeleni into into efingqiweyo evela kwezinye izihloko zolu ...
Kule post ndifuna ukuthelekisa indlela yokufikelela kwiinkcukacha zolwazi ngeendawo ze-geospatial ze-AutoDesk kunye neBentley. Ndandidla ukwenza oku: AutoDesk Civil 3D 2008 (ebandakanya AutoCAD Map) V8i AutoCAD Civil Bentley Imephu Bentley Imephu V3i 2008D 8 Log: Ifayile, qhagamshela data ... Log: Izicwangciso, database, ukuxhuma ...
Iifayile zobume, ezibizwa ngokuba yiifayili .shp, ziya kuba zifomathi zecatshulwa ngokweteknoloji kodwa asikwazi ukuphepha ukuba ziye zapapashwa njengeArcView 3x. Esi sizathu sokuba basetyenziswe ngokubanzi, kwinqanaba elona zininzi zeplatifti yejospatial ziye zaqulunqa iindlela zokusebenzisana nazo. ...
ArcView I-AutoCAD Imephu Bentley Systems 3D civil Dgn ESRI GvSIG OS shp
Ukuba ilungu le-AUGI MexCCA linemivuzo eninzi, enye yazo ifumaneka kwizixhobo okanye izifundo zokufunda. Kule meko ndibonisa isishwankathelo sezona zifundo ezifanelekileyo kwi-3D yezoLuntu kwiindlela, ukuhlaziywa kwendawo kunye nejejethi. Ezinye ziividiyo, ezinye iifayile zepdf. Kubalulekile ukuba ubhaliswe kwi ...
AutoCAD-AutoDesk, Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, Zobunjineli, Topography
Thina bacacise Into mabaphumle AutoCAD Imephu okanye AutoCAD Civil3D, adibanayo kwiinkonzo OGC kodwa iinguqulelo AutoCAD elula 2007 ukuya phambili, oko kukuthi ekubeni georeferencing functionality. Masicacise ukuba yiyiphi i-ArcGIS: Ayinxibelelani ne-Geodatabase okanye i-mxd egcinwe endaweni okanye Akukho nkonzo eyenziwe ngendabuko ...
Nangona i-AutoDesk yashiya ukuhambelana kwayo neLuxux kwiminyaka embalwa eyadlulayo, kwiminyaka yamuva iyenze imizamo yokubuyela, ngoko ngoku ivakalise ukuhambelana kwayo kule nkululeko. Inkqubo entsha yokuSebenza kweCitrix XenApp ivumela abaxhasi beekhompyutha kwi-AutoCAD Imephu ye3D ukudala, ukuqhuba nokulawula ...
NgoNovemba baya kufundiswa kwizixeko ezahlukahlukeneyo Spain iisemina izisombululo AutoCAD Imephu 3D 2009 kwimimandla mphandle, amanzi, ucoceko kunye nombane. Yintoni enokulindela kwi-Topography: Izixhobo zokudala, ukujonga ngokucacileyo nokuhlalutya imizekelo yezobugcisa, kunye nokuyila kunye neenkqubo ...
I-ERDAS isandulisile nje i-plugin entsha ye-AutoCAD evumela ukufikelela kwimifanekiso (ECW kunye ne-JPEG 2000) ngeprotocol ebizwa ngokuba ngu-ECWP. I-ECW iyifomathi enenzuzo eninzi, ngokukodwa ukunyanzeliswa ngaphandle kokulahleka okukhulu kwekhwalithi, ekubeni umfanekiso we-Tiff we-200 MB unokulinganisela kwi-8 MB; kakhulu ...
Kwesi sithuba siya kwenza le nkqubo ilandelayo: Yenza ifayile entsha, iingongoma yokungenisa ukusuka kwisikhululo iyonke ifayile e Excel, ukwenza polygon, nika georeference, thumela ku Google Earth uze nomfanekiso Google Earth ukuya AutoCAD Ngaphambilana siye sabona ezinye zezi nkqubo ngeenyawo, kule meko siza kubona ngazo AutoCAD ...
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, Topography
Esi sithuba ndizinikezela kwiminye imibuzo endiyifumanayo kwiinombolo ze-Google Analytics: Zixabisa kangakanani i-AutoCAD? Kuphi ukuthenga i-AutoCAD? ... Nanku uludwe olufutshane lweemveliso kunye namanani (angafaki irhafu yentengiso) exhomekeke kwilizwe ngalinye Amanani okuhlaziywa aphantsi Awa maxabiso athengiweyo kwi-intanethi ...
Ngaphambi kokuba sithethe ngendlela yokuthumela umfanekiso ukusuka kwiGoogle Earth ukuya kwi-AutoCAD ngoku sibone indlela yokungenisa umgangatho kwaye wenze lo mfanekiso unemibala kwaye unokuzingela kule ndawo 3D. Ubuqhetseba bufana nento esiyibonile nge-Microstation, ukudala izinto kunye nokuxazulula ingxaki ukuba umfanekiso u ...
Olu uluhlu lwemveliso ye-AutoDesk kunye ne-Bentley Systems, ezama ukufumana ukufana phakathi kwabo, nangona kunzima kuba ezinye izicelo zikhokelo olufanayo, kodwa indlela yabo ayisoloko ifana. Ngaphambi kokuba sibone into yokuziphendulela kwe-AutoCAD kunye ne-Microstation. Isishwankathelo, sinokuthatha izigqibo ezilandelayo: ii-Platforms ...
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Zobunjineli, Microstation-Bentley